Myanmar Breaking News (မြန်မာသတင်းများစုစည်းမှု): ၆၆(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရသည့် မကွေးသတင်းသမားသုံးဦးကို ခေါ်ယူစစ်ဆေး၊ သက်သေခံဖုန်းနှစ်လုံး သိမ်းယူ
Myanmar Breaking News (မြန်မာသတင်းများစုစည်းမှု)
Myanmar Breaking News and Articles ( မြန်မာ သတင်းများ စုစည်းမှု )
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများထဲက ၁၉ ရာစု မြန်မာ
၆၆(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရသည့် မကွေးသတင်းသမားသုံးဦးကို ခေါ်ယူစစ်ဆေး၊ သက်သေခံဖုန်းနှစ်လုံး သိမ်းယူ
၆၆(ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံ ထားရသည့် မကွေးသတင်းသမား သုံးဦးကို နယ်မြေရဲစခန်းက ဇွန် လ ၁၈ ရက်တွင် ခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့၏ဖုန်းများကို သိမ်းဆည်း ခဲ့သည်။ MGY သတင်းနှင့် ရသစုံ ဂျာ နယ်တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးတင် ရွှေ၊ ဂျာနယ်အသင်းဝင် မဖူးပွင့် နေခြည်နှင့် ဒီမိုကရေစီတူဒေး သတင်းစာမှ သတင်းထောက် မဇာဇာစန်းတို့ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဦးတင်ရွှေနှင့် မဇာဇာစန်း တို့၏ ဖုန်းများကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။ ‘‘သူတို့ကို စစ်ဆေးပြီးတော့ သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဖုန်းတွေကို သက်သေတွေနဲ့ သိမ်းတယ်။ သိမ်းပြီးတော့ စီအိုင်ဒီကိုပို့ဖို့ ရှိ တယ်။ အမှုကမပြီးသေးဘူး။ ဆက်စစ်စရာတွေ ရှိသေးတယ်။ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်စရာတွေ ရှိသေးတယ်။ စီအိုင်ဒီကိုတင်ပြရ မှာတွေ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ယူရမှာတွေ ရှိသေးတဲ့အတွက် လတ်တလော ဖမ်းဆီးခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး’’ ဟု အမှုစစ်အရာရှိ ဒုရဲအုပ်ဇော် မင်းဦးက ပြောသည်။
အမှုဖွင့်ခံရပြီး ၈ ရက်အကြာ၌ ခေါ်စစ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘ဖုန်းကို အသိမ်းခံရတာ သတင်းသမားတစ်ယောက်အနေ နဲ့ ရင်နာတယ်။ ဖုန်းနဲ့ပဲ ရုပ်သံ သတင်းလုပ်၊ သတင်းရေး၊ နောက် ပြီး ကျွန်တော့်မိသားစုရေးရာကိစ္စ၊ အချက်အလက် ဒါတွေအားလုံး က ဖုန်းထဲမှာ။ သတင်းသမားရဲ့ ဖုန်းကိုသိမ်းတာ၊ သတင်းသမားရဲ့ နှလုံးသားကို နုတ်ယူသွားတာနဲ့ အတူတူပါပဲ’’ဟု ဦးတင်ရွှေက ပြောသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် တင်ခဲ့ သော ပို့စ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆိုပါ သတင်းသမားသုံးဦးကို ဇွန်လ ၁၀ ရက်က မယ်လှတောင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အမှု ဖွင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။
MGY သတင်းနှင့် ရသစုံဂျာ နယ်တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာဦးတင် ရွှေ၊ ဂျာနယ်အသင်းဝင်မဖူးပွင့် နေခြည်နှင့် ဒီမိုကရေစီတူဒေး သတင်းထောက် မဇာဇာစန်းတို့ သည် ဇွန်လ ၅ ရက်တွင် မကွေး မြို့နယ် မယ်လှတောင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ မြင်ကင်းကျေးရွာ လမ်း ဟောင်းပြုပြင်လမ်းချဲ့ခြင်း၌ သစ်ပင်များခုတ်လှဲမည့်ကိစ္စ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်မညီဘဲ အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်းလုပ်နေသည့်ကိစ္စများရှိနေကြောင်း ဒေသခံများကအကြောင်းကြားလာသဖြင့် သွား ရောက် သတင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် သတင်းအချက် အလက် ပြည့်စုံစွာမရရှိသဖြင့် သတင်းမရေးသားခဲ့သော်လည်း ဦးတင်ရွှေက တင်ရွှေမင်းဘူးဖေ့စ် ဘွတ်ခ်အကောင့်ဖြင့် လူမှုကွန် ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေးသား ဖော်ပြခြင်းနှင့် ၎င်းရေးသားမှုကို မဇာဇာစန်းက သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခြင်းအပေါ် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဌေးလွင်က ဇွန်လ ၁၀ရက်တွင် သတင်းလာရောက်ယူသူသုံးဦးလုံးကို မကွေးနယ်မြေရဲစခန်းတွင် ၆၆(ဃ)ဖြင့် တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းခြင်းဖြစ်သည်။
တင်ရွှေမင်းဘူးအကောင့် ဖြင့် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားခဲ့သည်မှာ ‘‘သို့/ မကွေး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ထွေအုပ်တာဝန်ရှိသူများ၊ မြေစာ ရင်းတာဝန်ရှိသူများခင်ဗျား။ မသိ လို့မေးပါရစေ၊ မကွေးမှာ အုတ် ဖုန်လုပ်ငန်းခွင့်ပြုထားပါသလား။ မြင်းကင်းသင်္ဘောဆိပ်နယ်မြေ၊ ပလပ်မြေတွင် အုတ်ထုတ်လုပ်နေ ပါသည်။ မယ်လှတောင်အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သတင်းမီဒီ ယာတွေ သူ့ခွင့်ပြုချက်ရမှ ရွာထဲ အ၀င်ခံမယ်နဲ့ အာဏာရှင်ဆန် ဆန်ပြောသေးသဗျ၊ မယုံသွား ကြည့်ပါ။ အခွန်ဘဏ္ဍာအလွန်နစ် နာပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်ကလည်း ခတ်ထန်ထန်ပါ။ ဒီကြားထဲသစ် ပင်များအား ဘူဒိုဇာနှင့် ထိုးဖို့လုပ် နေတဲ့အတွက် မြင်းကင်းရွာပြည် သူတချို့က ကန့်ကွက်လျက်ရှိနေ ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူများကွင်း ဆင်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်’’ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်းပို့စ်အောက်တွင် မဇာ ဇာစန်းမှ Zar Zar Zar Zar အ ကောင့်ဖြင့်‘မဖြစ်သင့်တာတွေပါ’ ဟု Comment ရေးသားခဲ့သဖြင့် ၎င်းတို့သုံးဦးစလုံးကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဌေးလွင်က တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
‘‘ကျွန်တော်ရေးတဲ့အပေါ် မှာ ကျွန်တော်တာဝန်ယူရဲပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက် မပြည့်စုံ သေးလို့ မိခင်သတင်းစာတိုက်ကို တောင် မပို့ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့တာ ၀န်ရှိသူတွေနဲ့ ပြည်သူတွေသိသင့် တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော့်အကောင့် ကနေ ရေးခဲ့တာပါ။ ကြိုက်သလို စစ်ပါ’’ဟု ဦးတင်ရွှေက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းရေးသားခဲ့ သည့် ပို့စ်အတွက် ၎င်းမှာသာ တာဝန်ရှိပြီး မဆိုင်သည့်သတင်း သမားအမျိုးသမီးငယ် နှစ်ဦးတို့ ကိုပါ ထည့်သွင်းတရားစွဲဆိုခြင်း သည် သတင်းသမားကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်သလို မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို တားဆီးခြင်းဖြစ် သည်ဟု ဦးတင်ရွှေဆိုသည်။
မဖူးပွင့်နေခြည်သည် မည် သည့်မှတ်ချက်မျှ မရေးခဲ့သော် လည်း သတင်းအတူလိုက်ရာတွင် ပါသဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဦးတင်ရွှေကဆိုသည်။
‘‘ဒီ ၆၆(ဃ)ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအနေနဲ့ ကန့်ကွက် တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်နေချိန် တောင်မှ ခုလို ၆၆(ဃ)နဲ့ တရား စွဲတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာကျွန်မတို့ သတင်းထောက်တွေကို သတင်း မလိုက်ရဲ၊ မရေးရဲအောင် ခြောက် လန့်တာပဲ။ ပြည်သူကိုအမှန်သိ အောင် ချပြဖို့အတွက်ကို ရေးရ မှာ ကြောက်သွားအောင်၊ လက် တွန့်သွားအောင်လုပ်တာပဲလို့ ကျွန်မမြင်တယ်’’ဟု ဒီမိုကရေစီ သတင်းထောက်မဇာဇာစန်းက ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
မကွေးမြို့နယ် မယ်လ တောင်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ဦးဌေးလွင်က မကွေးမြို့နယ်မြေရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတွင် အမှုလာရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၈ ရက်က ၎င်းဦးဆောင်သောအဖွဲ့ဖြင့် ကျေးရွာလမ်းချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာ အဆိုပါသတင်းထောက်သုံးဦးက တားမြစ်ခြင်းနှင့် တင်ရွှေမင်းဘူးအကောင့်နာမည်ဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ၎င်း၏ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေသည့် အရေးအသားများရေးသားခြင်းတို့ကြောင့် အမှုဖွင့်လှစ်တိုင်ကြားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
‘‘ကျွန်တော်က လမ်းဖောက် ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့ နေ ရာမှာ သူတို့ကိုသတင်းရချင်ရင် ကျွန်တော်ဆီကိုလာပါ။ ဖြေကြား ပေးပါမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ တရားမ၀င်အုတ်လုပ်ငန်းဆိုတာ လည်းမရှိပါဘူး။ အားလုံးဟာ တရားဝင်ဓာတ်သတ္တုခွန်ဆောင်ပြီး လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပလပ်မြေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ အားလုံးဟာ လန(၃၉)ကျပြီးသား မြေတွေချည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေပြီး ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေထိရောက်လို့ အခုလိုအမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ဦးဌေးလွင်က ပြောသည်။ မိုးကျော်
6/19/2017 04:30:00 PM
ဒီနေရာမှာ ကိုယ်သိချင်တဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားလုံး ရိုက်ထည့်ပြီး သတင်းတွေကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
စွန့်ပစ်ထားသော ပမာဏများပြားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ မံ...
ဘန်ကောက် မြေအောက်ဘူတာရုံတွင် ရထားရှေ့ အမျိုးသမီး တ...
၆၆(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရသည့် မကွေးသတင်းသမားသုံးဦးကု...
Reflection ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ဘာေ...
ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၁၈၃ သန်းအပြင် ဂိုးသမား ဒီဂီယ...
ခြောက်နှစ်အတွင်း အငှားယာဉ်စလစ်ဈေး လူစီးစလစ်ဈေးအထက်...
(UCGA) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ၇၂ နှစ်ပြည့် မေ...
ယနေ့စတော့အိတ်ချိန်း ၁ နာရီ ဈေးကွက်အခြေအနေ
စမောလင်းကို ခေါ်ယူရန် စပါး စောင့်ကြည့်
ပြည်တွင်းမှာ ဝယ်ယူရနိုင်မယ့် Mitsubishi Pajero 201...
KBZ Bank Cup ပြိုင်ပွဲ ကျပ်သိန်း ၃၅ဝဝ ကျော် အကုန်က...
Facebook တွင် ခင်မင်သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအား ချိန...
ရန်ကုန်မြို့၏ ဒုတိယမြောက် နောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်အာ...
“ ကျီးကန်းတွေကုို လွတ်လပ်စွာ အာ ခွင့် ပေးလုိုက်ပါ ...
အဆောင်နေ အမျိုးသမီးကို ဘေးခန်းတွင်နေထိုင်သူ အမျိုး...
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် မျက်စိသူငယ်အိမ်မှတ်တမ်း ယခုန...
ရုရှားရွက်လှေတစ်စင်းကို မြောက်ကိုရီးယား ထိန်းသိ...
ရာသက်​ပန်​မဟုတ်​သော အငှားယာဉ်များ နံပါတ်​အနီ်​မှအန...
ဆယ်တန်းအောင်ပြီ,, ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ,,?
လှည်းကူးမှ ကျူးကျော်တဲ အလုံးရေ ၄၀ဝ၀ ခန့် ရှင်းလင်း...
ရှမ်းနနွင်းကို အိန္ဒိယတစ်နိုင်ငံတည်းသာ ဝယ်လက်ရှိ၍ က...
ရုတ်တရက်မြေပြိုကျ ပိမိ၍ လူတစ်ဦးသေဆုံး
အနက်ပေ ၄ဝဝ အတွင်း စက်ရေတွင်း တူးဖော်ပေးနိုင်ရေး အြ...
မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးပုံရိပ်များခေါင်းစဉ်ဖြင့် ...
ဘက်ထရီပြားလေးကို မျိုချမိသဖြင့် နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးေ...
ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးပထမရရှိသည့် ကချင်ြ...
ဆိုးဝါးပြင်းထန်စွာ မီးအကြီးအကျယ် လောင်ခဲ့သည့် လန်ဒ...
သဘာဝသယံဇာတများနှင့် ပတ်သက်၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတ...
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည...
ရွှေကိုကန့်သတ်ကုန်စည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပြီးပို့ကုန်၊ ...
ငွေဆောင်ကမ်းခြေတွင် လှိုင်းကြီးမှုများကြောင့် ရေကူးခ...
တောင်ကြီး စူဠာမုနိဘုရားတွင် ရေစစ်ကန်များ ပြုလုပ်မည...
ရခိုင်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကျ၍ အဆိပ်သောက်သေသည့်...
လန်ဒန် ဗလီတစ်ခုရှေ့ လူအုပ်ထဲ ကားဖြင့်ဝင်တိုက်မှုကြေ...
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)အပါအဝင် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေး မုံရွာ...
တိုင်းအဆင့် ပန်းချီပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရွေးချယ်ရေး ကော...
မလေးရှား အဝေးပြေး လမ်းမတစ်ခုတွင် ကားတိုက်ခံရပြီး ဆ...
အရှိန်လွန်မောင်းသည့်ယာဉ်များကို တစ်လပညာပေး ကာလအဖြစ...
တနိုင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရွှေမှော်များ၌ ခန္တီးမြို့...
Y-8 လေယာဉ်ပျက်ကျပြီး ၁၂ရက်အကြာ Black Box တွေ့ရှိ
ထိုင်းက ထုတ်လုပ်ရေးက မင်း သားတင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတ...
ရန်ကုန်၏ ရေကြီးရေလျှံမှုနှင့် ငလျှင်ဒဏ်ခံနိုင်ရေးရှ...
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မေတ္တာထားပြီး စိတ်ချမ်းသာ အောင...
ဆာဘိုးသာခြံဝင်းနေအိမ်ထောင်စု ၃၀၀ ကျော်ကို ကွန်ဒိုေ...
လေမုန်တိုင်းထန်မှုကြောင့် CHINA EASTERN လေကြောင်းလ...
မဟာမိတ်များက ဗုံးကြဲပြီးနောက် ဆီးရီးယားစစ်လေယာဉ်ကိ...
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ MK Travels & Tour ကုမ္ပဏီလီမ...
ရန်ကုန်-ဒလတံတား အမြန်ဆုံးတည်ဆောက်ရန် ဆန္ဒပြုခဲ့သည့်...
ပြုံယမ်းတွင် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် မန္တလေးတွင် သ...
လန်ဒန်၌ လမ်းသွားလမ်းလာများကို ယာဉ်တစ်စီးဖြင့်ဝင်တု...
ကလေးစစ်သားဘဝ၊ ဒုက္ခသည်အဖြစ်မှ အောင်မြင်သည့်ရှေ့နေဖြ...
တာချီလိတ်တွင် ပစ်သတ်ခံရသူ ထိုင်းနိုင်ငံသားဟု ထိုင်...
လေးနိုင်ငံဖိတ်ခေါ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ မြန်မာယူ ၁၅ အသင်...
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းတွင် ကျပ် ၅၈၅ သိန်း တန်ဖို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် မိုင်းတုံတွ...
​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်၏ ၇၂ မြောက် မွေး​နေ့ မြင်ြး...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ...
လှိုင်းရိုက်အားကိုအသုံးပြုပြီး စွမ်းအင် ထုတ်နိုင်တေ...
ရွှေပြည်သာကျူးကျော်အိမ်ထောင်စု ၅၀ ကျော်ကိုဖယ်ရှားပေ...
ဘရာဇီးနောက်ခံလူ အဲဗက်စ်ကို ခေါ်ယူရန် မန်စီးတီးနည်ြး...
စာအုပ်ကောင်းတွေ ထက်အောက်မြေတခွင် ပျံ့နှံ့စေချင်
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှ...
အခိုးအငွေ့တွေက လက်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာ
အဆိုးဆုံးဗီလိန်ဇာတ်ကောင် ၁၀ ဦး
စိတ်ကြွဆေး ၂သန်းကျော် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းမိ
ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့၌ တရုတ်- အီရန် ရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်...
“မျှတတဲ့ တရားစီရင်မှုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းကို ရရှိမ...
ရခိုင်ပြည် ၁၀တန်းအောင်ချက် တိုးတက်ရေးအတွက် စိန်ခေါ်...
ရေနက်ထဲထိ ငုပ်လျှိုးပြီး ပျက်စီး နျူကလီးယားဓာတ်အား...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၇၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်...
ယူရို သန်း ၃၅၀ ပေးချေနိုင်မှ ရော်နယ်ဒိုကို ခေါ်ယူနု...
ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဖလားပွဲတွင် ပေါ်တူဂီနှင့် မက္ကဆီကို ...
အခြေခံပညာရေး ဥပဒေ မူကြမ်းအပေါ် ရှုမြင်ချက်
၆၆ (ဃ) ဖျက်သိမ်းဖို့ လိုပြီလား ??
မြိတ်မြို့တွင် သေနတ်ကိုင်ဆောင် မူးယစ်ဆေးရောင်းချနေ...
ကျိုက်ထိုမြို့နယ် အတွင်း လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့်...
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲသို့ မြ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ မန္တလေးတွင် သစ်ပင်စိုက်.
ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းသို့ ကုန်သေတ္တာတင် ရေယာဉ်ကြီးများ၏ ...
မူဆယ် ၁ဝ၅ မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ လုပ်ငန်းရှင်များ...
လန်ဒန် ဂရင်းဖဲလ်တာဝါ မီးလောင်မှု ဖော်ထုတ်ပေးရန် မြိ...